बालिका वधूकी अविका प्रेममा, को हुन् त उनका प्रेमी, के गर्छन्?
Homeसमाचारबालिका वधूकी अविका प्रेममा, को हुन् त उनका प्रेमी, के गर्छन्?
November 12, 2020 admin समाचार 9244
पपुलर सिरियल बालिका वधूमा आनन्दीको भू’मिका नि’भएकी अविका गौरले आ’फ्नो लवलाईफलाई अफिशिलय शे’यर गरेकी छन् । उनले आफ्नो बोयफ्रेण्डको नामलाई पुरै सा’माजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । साथै आफ्नो रिलेशनसीपलाई खुलाएर आ’फ्ना फ्यानहरुलाई स’प्राईज दिएकी छन् ।
अविकाको प्रे’मी मिलिंद चांदवानी हुन् । उनी रोडीजको एक कंटेस्टेंट र’हेका थिए । उनै मिलिंद चांदवानीलाई अविकाले य’तिबेला डे’ट गरिरहेकी छन् । अविकाले मिलिंदलाई आफुले माया गर्ने कुरा क’बुल गरेको कुरा सामाजिक स’ञ्जाल अन्तरगतको इंस्टाग्राममा पोष्ट गरेकी छन् । साथै उनले मिलिंदसंगको आफ्नो रो’मान्टिक तस्वीरहरु पनि शेयर गरेकी छन् ।
अविकाले आफ्नो इंस्टाको स्टेट’स्मा लेखेकि छन्,‘मेरो प्रार्थनाको ज’वाफ मिलेको छ । मलाई मेरो जिन्दगीको प्यार मि’लि सकेको छ । यो दयालु मा’निस मेरो हो । र म पनि सदाकोलागी उनैकी हुँ । हामी सबैले एउटा यस्तो पार्ट’नर चाहान्छौं कि उस्ले हामीलाई सम्झियोस् । विश्वास गरोस्, इंस्पायर गरोस् र के’यर गरोस् । उ मेरोलागी त्यही पा’र्टनर हो ।’
अविका पुर्ण रुपले मायाको भा:वमा अगाडी लेख्छिन्,‘तर हामी मध्य धेरैलाई लाग्छ कि यस्तो पा’र्टनर पाउन गाह्रो छ । तर मैले भेटे’की छु । त्यसैले मलाई यो स’पना जस्तो लागि रहेको छ । तर यो साँ’च्चै हो । केही हदस’म्म साँच्चै नै हो । तर म तपाईँ सबै’कोलागी प्रा’र्थना गरिरहने छु । कि तपाईँले पनि मैले गरे जस्तै मह’सुस गर्नुस् जस्तो मैले हिजो’आज गरिरहेकी छु ।’
अभिनेत्री अविकाले प्रेममा निकै रमा’हट गर्दै धेरै भावनाहरुलाई स’जाएर अझैंं स्टेट’स् लेखेकी छन् । वास्तवमै उनी धेरै नै द’यालुु र अरुका बारेमा सोच्ने अभि’नेत्री मध्य पर्ने गर्छिन् । जुन कुरा उनी आफैले प्रमा’णीत गरिदिएकी छिन् । सबैकोलागी प्राथ’ना गर्नेछु भनेर । -इताजा खबर बाट
शिशिर भण्डारी अभिनित ‘माछी पानीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
February 15, 2021 admin समाचार 6208
खान नपाउदा ५ लाखमा कि’ड्नि बेचिन् यी आमाले (हेर्नु`होस् यो कारुणिक भिडियो)
February 18, 2022 admin समाचार 1730
काठमाडौं तामाकोसी नजिक को यो निकैनै मार्मिक समाचार रहेको छ। खान नपाउदा र आफ्नो बच्चालाई पाल्नकै लागि भएपनी5लाखमा कि’ड्नि बेचिन क ठै बरा । कि’ड्नि बेच्ने आमा`लाई पनि सानोमा फालेको तर एउटा बुढाे
टिकटकमा भाइरल बने,७० बर्षका श्रीमान र २० बर्षकि श्रीमती झल्कीयो सुमधुर प्रेम(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 10, 2020 admin समाचार 8331
केहि समय अ’गाडी सामाजिक संजा’लमा भारल भएका इलामको यो जोडी फेरी भा’इरल हुन् पुगेको छ । एक बृद्धसंग बि’वाह गरेको इलामका एक जोडी पछि’ल्लो समय निकै चर्चामा रहेका छन । टिकटकमा ए’काएक भाइरल बनेको जोडी